Qore: C/fitaax Maxamed Sugulle
AMST University, Business Administration
Ummad walba oo ku nool adduunka waxay leedahay Qadiyado kale duwan , bulsho walibna qadiyadeeda ayaa u ah asaasi muhiim ah.
Qadiyad waa: wax ay ku wada midaysan yihiin shacab meel ku nool oo kala aaminsan afkaaro kala duwan ayna qadiyadu u tahay asaasi lama taabtaan ah.
Tusaale ahaan dalka Falastiin qadiyadoodu waa soo celinta dhulkooda ay ka haysato Israa’iil, sidoo kale Dalka la magac baxay soomaaliland qadiyadoodu waa ka go’ida soomaliya ama in ay noqdaan dowlad madaxbanaan.
Marka cid kastoo ka hor istaagta dalalka aan kor ku soo sheegnay qadiyadooda waxay kala kulmiyaan dagaal iyo cadaawad aan dhamaad lahayn.
Hadaba Majirtaa in ay Dowlad Gobaleedka Puntland iyo shacabka puntland ay leeyihiin Qadiyda ay kwada midaysan yihiin?
Puntland markii la yagleelayay waxaa loo asaasiya ujeedooyin fara badan waxaan ugu muhiim sanaa
1- sugidda amniga Gobalada ay Puntland ka koobantahay.
2- horumarinta shacabka iyo dhulka puntland.
3- iyo sidee ay qayb wayn uga qaadan lahayd dhisada dawlada soomaaliyeed oo aan danaheeda ka hor imaanayn.
Waxaa la oran karaa waxbadan baa laga qabtay ujeedooyinka loo asaasay Puntland hadaan fiirino dhinacyada amniga waxaad dareemaysaa in ay ku jirto goobaha ugu amaan badan soomaaliya, sidoo kale dhanka dhaqaalahana waxaa la oran karaa horumar lataaban karo bay ka gaartay.
DGPL waxay sidoo kale kaalin wayn ka ciyaartay dhisada dawlad soomaaliyeed taas bilaabtay ilaa intii shirka Kenya socday walina siida oo dakhliga puntland soo gala in badan la siiyo Dawlada Soomaaliya ee Baydhabo xarun ka dhigtay.
Haddii aan dib ugu soo laabto dhanka horumarka waxaa waayadaan laga maqlayay saxaafada in DGPL ay soo saarayso khayraadkeeda dabiiciga ah taasoo ay doonayso inay ku horumariso dhaqaalaheeda , run ahaantiina waa ubaahan yahay dhaqaalaha puntland in lahorumariyo maxaa yeelay markastoo dhaqaaluhu horumaro markastoo dadka kunool puntland ay ku sii waaran amni iyo barwaaqo.
Hadaba waxaa muuqata in maamulka puntland ay soo saarida shidaalka ama khayraadka dabiicaga ka dhigteen asaas ama qadiyad lama taabtaan ah cida kastoo ka hortimaadana ay kalakulmayso cawaaqib xumo aad u daran, sidii ka dhacday deegaanka Majiiyahan halkaas ay Dowlado ladagaalamtay qolyo is hortaagay baarintaan lagu sameen lahaa goobtaas taasoo sabatay dhimasho iyo dhaawac badan.
Sidoo kale ra’iisul wasaaraha DFKS Cali Maxamed Geeddi ayaa DGPL kala laabtay kal soonidii Xafiiskiisa kadib markii uu is ka horsitaagay DGPL in ay sii wadaan Barnaamijkeeda Baarida iyo soosaarida shidaalka isagoo soo qoray warqad ay ku qoran tahay in la joojiyo hawlaha baaritaanka iyo soosaarida shidaalka Puntland.
Hadaba ma la oran karaa in ay puntland ay yeelatay qadiyad ay ka wada midaysan yihiin shacabka iyo dawlada Puntland, taasoo ah soo saarida shidaalka iyo khayraadka dabiiciga ah, cid kastoo diidan ama ka hortimada mawqif cad oo laga wadamidaysan yahay laga gaaro.
Madaxwayna Dowlad gobaleedka Puntland Genaral Cadde Muuse oo ah nin aqoon yahan ah ayaa moodaa in uu ku guulaystay in shacabka Puntland u sameeyo qadiyad ay kawada midaysan yihiin shiikh iyo shariifba arintaas oo run ahaantii ahayd mid ka maqan shacabka reer puntland, dadkuna markay leeyihiin qadiyado midaysan waxaa fududaanaysa in ay midnimadoodu adkaato isfahamkooduan bato, badanaana qadiyado madhamaato xitaa hadii isbadal ku dhaco maamulka oo la doorto hogaan cusub ee meesheedii baa laga siimiisaa.
Ugu danbayntii waxaan u soojeedinayaa shacab waynaha Puntland in ay kumitidaan qadiyaddooda tasoo ah runtii ah waxa ay dad qadiyada ka dhigtaan maxaa yeelay hadii shidaal ama khayraadka dabiiciga ah ee dhulkeena ku aasan la soo saaro waan hodmaynaa waxaana ku biiraynaa dalalka barwaaqoobay, sidoo kale waxaan gacan iyo hiilba u fidinaynaa shacabka soomaaliyeed meel kastay joogaan.
.....Waxaase Somaalida Amakaagg iyo Af-qabsi ku riday Gen. Cadde muuse oo isaguna qaaday waddadii Maxamed Dheere. Markii uu 19 kii bishaan ku dhawaaqay in uu kalsoonidii kala noqday Ra’iisul-wasaaraha DF. Md. Dr. C.M. Geeddi ama haddan sii caddeeyo D,F. ee KMG oo dhan.... Guji...
Ma ogtahay in Puntland ay kusoo badanayan carruurta aan haysan wax daryeela, mase ogtahay in DGPL aysan u samayn wax mashaariic ah oo lagu daryeelayo, mase ogthay in aan Saxaafadda Puntland gudeheeda ka jirta arrimaha Pulshada ka hadli karin maadaam ay saxaafadaas maamulan wasiiro ka tirsan dowladda.
SAAMIYADA RANGE RESOURCES EE SUUQA ASX::::